Villino Caterina Luxe & Nethezeka - I-Airbnb
Villino Caterina Luxe & Nethezeka
Riomaggiore, Liguria, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Manuel & Chiara
Ikhodi ye-Citra 011024-LT-0133
Indawo yami yokuhlala iseduze nazo zonke izinkonzo ezinombono oyingqayizivele wolwandle. Uzoyithanda indawo yami yokuhlala ngenxa yalezi zizathu: indawo, ukusondelana kanye nemibono. Uzoba nethala elikhulu nengadi ezokwenza ukuhlala kwakho kungalibaleki. Indawo yami yokuhlala ifanele izithandani nabathanda bodwa.
Yindlu yesitudiyo efakwe konke ukunethezeka (i-wi fi, umshini wokugeza izitsha, umshini wokuwasha) ene-parquet flooring ehlukaniswe indawo yokuhlala kanye nendawo yokulala enombhede ophindwe kabili. Lesi situdiyo sibonakala ngokuba nezingcezu zedizayini zase-Italy ezinjengamalambu e-foscarini kanye nefenisha ye-doimo italia design.
Ifulethi libheke ithala elikhulu elizimele elakhiwe kanye nengadi enezihlahla zikalamula.
4.91 · 270 okushiwo abanye
Ifulethi lonke itholakala nge-telemaco signorini. Kungumgwaqo omkhulu wesibili we-Riomaggiore kanye nomgwaqo we-panoramic osuka esontweni eliphakathi ukuya esiteshini, indawo emaphakathi kodwa hhayi emgwaqeni ophakathi iqinisekisa ukubuka kolwandle nokuphumula okuphelele.
Ngitholakala njalo ngesms or whatsup kanti ugogo kaManuuel uhlala phezulu
Hlola ezinye izinketho ezise- Riomaggiore namaphethelo